NextMapping | politika Fiarovana fiainan'olona
Synthesis ao amin'ny Work Inc., dba Cheryl Cran sy NextMapping dia tsy manangona fampahalalana manokana azo fantarina momba anao rehefa mitsidika ny tranokalanay izahay raha tsy manome izany an-tsitrapo izany, ohatra, amin'ny alàlan'ny fifandraisanay amin'ny alàlan'ireo pejinay mailaka, ka ao anatin'izany ny fandefasana fanontaniana. Izahay dia tsy hizara ny fampahalalana anao amin'ny antoko fahatelo ivelan'ny fikambanana misy anay, ankoatra ny ilaina amin'ny fanatanterahana ny baikonao.
Raha tsy mangataka antsika tsy to, dia manorata anao alalan'ny mailaka amin'ny ho avy mba hilaza aminareo momba ny Specials, vaovao vokatra na ny tolotra, na fanovana ity politika fiainana manokana.
Ny fahazoana mivezivezy sy mifehy ny fampahalalam-baovao
Azonao atao ny misafidy ny fifandraisana ho avy aminay amin'ny fotoana rehetra. Azonao atao ny manaraka ireto amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny hifandraisana aminay amin'ny alàlan'ny adiresy mailaka na nomeraon-telefaona nomena ny tranokalanay. Ny fampahalalana momba ny tena manokana voangona amin'ireto tranga ireto dia mety misy ny anaranao, ny antsipirian'ny fifandraisana, ny adiresy mailaka ary ny laharana an-tariby. Tsy mizara na mivarotra ny mombamomba anao manokana izahay na iza na iza.
Misy fanontaniana tokony hapetraka amin'ny: info@nextmapping.com